HANDBALL – CCCOI 2016 - Nitohy ny fahombiazan'ny AS Tsiky sy AS Saint-Michel
HANDBALL – CCCOI 2016 – Nitohy ny fahombiazan’ny AS Tsiky sy AS Saint-Michel
Na dia somary mafimafy ho an’ny AS Tsiky Boeny sy ny AS Saint-Michel Analamanga aza ny lalao natrehany, omaly, nandritra ny andro fahatelon’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny rano- masimbe Indianina, taranja handball dia tafavoaka ho mpandresy ihany izy ireo, nony farany. Tamina elanelan’isa tery dia tery no nibatan’izy ireo ny fandresena fanindroany tamin’ireo lalao telo efa vita, tamin’ity fifaninanana ity.
Niondrika teo anatrehan’ ny AS Tsiky, lefitry ny tompon- dakan’i Madagasikara, tamin’ny isa 25 no ho 23, ny ekipan’ny PC Bouéni, avy any Mayotte, teo amin’ny sokajy zazavavy. Lavon’ny AS Saint-Michel tamin’ny isa 19 noho 18 kosa ny AS Vacoas Phoenix, avy any Maorisy, teo amin’ny andro fahatelo ho an’ny vondrona misy azy ireo. Fandresena tokana avy no ilain’ireo solontena malagasy ireo dia tratran’izy ireo ny dingan’ny manasa-dalana.
Ho an’ireo vokatra hafa indray dia niondrika teo anatrehan’ny AS Tsimkoura any Mayotte, tamin’ny isa 19 no ho 18, ny ekipan’ny ASC Saint-Gilles avy any La Réunion, izay nandavo ny ekipan’ny Masindahy Misely teo amin’ ny andro voalohany. Nitohy, ary tsy mbola nisy nahasakana, kosa ny dian’ny Jeunesse Sportive Benedictine (JSB) avy any La Réunion, izay nanilika ny AS Tsiky teo amin’ ny andro voalohany. Tamin’ ny isa mavesatra 32 no ho 9 no nandresen’izy ireo ny ekipan’ny MF Storm avy atsy Seychelles, omaly. Efa naman’ ny mangoron’entana kosa
ny Combani HBC avy atsy Mayotte, izay lavon’ny Tana Handball Club, tamin’ny alahady lasa teo. Mbola nibaby faharesena indray izy ireo, omaly, nanoloana ny Le Port avy atsy Maorisy. Ity farany sy ny THBC izany no hiatrika ny lalao famaranana kely eo amin’ny vondrona misy azy ireo, rahampitso.
Football – Covid-19 : La CAF offre un pactole aux fédérations
Vie de club – L’Amitié Sportive de Tana fête ses 65 ans
Hygiène de vie – La sensibilisation antitabac axée sur la protection des jeunes
Question à Falihery Razafindrakoto, président du réseau malgache du handicap – « Les enfants albinos méritent une dignité »
Lalan’ny Frankôfônia – Voarara tanteraka ny fandehanan’ ny posiposy, sarety ary kalesa
SANIFER ouvre son 4ème magasin – Un magasin d’espoir en situation de crise
La pandémie COVID-19 place la transformation numérique au premier rang des priorités
CASEF – Recrutement d’un Consultant Individuel « Spécialiste en Agri business et en Gouvernance des filières »
Aire protégée d’Ampasindava – Douze pilleurs de mangroves arrêtés
Fitiliana covid-19 :: Marary telo amby enimpolo vaovao tao anatin’ny iray andro 4 juin 2020
Fifindrana mpilalao :: Hiverina hilalao ao amin’ny FC Lorient i Jeremy Morel 4 juin 2020
Fanararaotana krizim-pahasalamana :: Andian’olona mikononkonona fanakorontanana 4 juin 2020
Fiparitahan’ny tsimok’aretina :: Gadra iray mitondra ny “Covid 19” tao Antanimora 4 juin 2020
Tetiandrom-pampianarana :: Manangasanga ny fampihemorana ny datim-panadinana 4 juin 2020